ငွေကိုလေလိုသုံးသူ ကျောက်သူဌေးကြီး မိုးကုတ်ဦးမြမောင် – Shwe Yaung Media
ငွေကိုလေလိုသုံးသူ ကျောက်သူဌေးကြီး မိုးကုတ်ဦးမြမောင်
ရန်ကုန်မြို့ Strand ဟိုတယ်မှာအနေများတဲ့သူ…‌ငွေကို‌လေလိုသုံးနိုင်‌ပေမဲ့လည်းမ‌ပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့သူ..သူဌေးကြီးမိုးကုတ်ဦးမြမောင် စာရေးဆရာသော်တာဆွေက သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မိုးကုတ်မြို့သား ကိုမြမောင်အား ငွေကိုလေလိုသုံးသူ ဟူ၍
တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ သည်။ မိုးကုတ်မြို့နေ ဦးကြာညွန့်ဒေါ်သန်းတို့ ဇနီးမောင်နှံသည် မောင်မြမောင်လေး မွေးဖွားပြီး နောက်ပိုင်းသိသာစွာစီးပွားတက လေတော့ သည်။ကျောက်ကြီးကျောက်ကောင်းများ အောင်ခဲ့ကြ၏။ကိုမြမောင်က တစ်သိန်းသုံးလျှင် သူ၏
မိဘများကျောက်တွင်းတွင်နှစ်သိန်းတန်ကျောက် အောင်လေ၏။ကိုမြမောင် တစ်နေ့တစ်သောင်းသာ သုံးစွဲပါက နှစ်သောင်းတန်ကျောက်သာ အောင်၏။ ကိုမြမောင်ကရန်ကုန်တွင်နေထိုင်ပြီး ငွေကိုလေလိုသုံးစွဲလေ၏ ။
စာရေးဆရာသော် တာဆွေ စသော သူငယ်ချင်းများနှင့်အရက်သောက်၏ ကြက်တိုက်၏ဟော်တယ်တက်ကြ၏။သုံးကြ၏ ဖြုန်းကြ၏။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ခြံဧကပေါင်းများစွာ ဝယ်ထား၏။ဖက်လိပ်စိန်(ရွှေကို ဖက်ကဲ့သို့ ကတော့ထိုး၍ ထိပ်တွင် တစ်ပွင့်စိန်
တပ်ကာ နားဋောင်းအဖြစ် ဝတ်ဆင်ခဲ့ခြင်းl နဂါးဒေါ်ဥ ကဲ့သို့ ရှေးက သူဋ္ဌေးမကြီးများသာ ဝတ်ဆင်ခဲ့ကြသည်)များစွာရှိလေ၏။အရည်အသွေးကောင်းသော ပတ္တမြားများ ဆိုလျှင်ကား ပြောဘွယ် မရှိတော့ပါ ။စာရေးဆရာသော်တာဆွေက ကိုမြမောင် ခင်ဗျား
ဘယ်လောက်ချမ်းသာလဲဟု မေးရာ“မသိဘူးဗျ”ဟူ၍ အဖြေပေးခဲ့၏။ မိုးကုတ်ကနေ မန္တလေးအထိ တစ်ရာတန် ကားလမ်းအပြည့် ခင်းနိုင်တယ် ဟူ၍ ပြောပြ၏။ဦးမြမောင် မိုးကုတ်မှမန္တလေးသို့ ကားဖြင့်ဆင်းလာရာ လမ်းတွင် ဂျစ်ကားတစ်စီးက သူ၏ကားကို
ကျော်တက်သွား၏။ ထိုအခါ ကိုမြမောင်က ဒရိုင်ဘာအား အဆိုပါဂျစ်ကားကို အမီလိုက်ခိုင်း၏။
မီလာသောအခါ နောက်ကနေ ဝင်တိုက်ခိုင်းလိုက်၏။ဂျစ်ကားပေါ်က လူများ မျက်ကလူးဆန်ပျာဖြင့် ဆင်းလာသောအခါ” ခင်ဗျားတို့ကား ဝယ်စဉ်က ဘယ်လောက်ပေးရသလဲ? ““၅၀၀၀ ကျပ် ပေးရတယ်””ရော့ ၅၀၀၀ ” ဟူ၍ အလျော်ပေးလိုက်၏။*
ငွေကိုလေလိုသုံးသူ ( သို့မဟုတ် ) ဘဝ၏အလုပ်လက်မဲ့ရှမ်းစော်ဘွားများ တန်ခိုးအာဏာ ကြီးထွားစဉ်ကာလ တချိန်သောအခါ၌ မိုးမိတ်မြို့နယ်သစ်တောကြိုးဝင်းထဲတွင်မိုးမိတ်စော်ဘွား၏ ဆင်တစ်ကောင်ကို လူတစ်ယောက်က
သေနတ်နှင့်ပစ်သတ်လိုက်လေ၏။မကြာမီ ခေါင်းပေါင်းနီနှင့်ရှမ်းပုလိပ်များရောက်လာကာဆင်သတ်သူကို ဖမ်းဆီးမည်ပြုသော်ထိုလူက”ဟေ့ဒါတောဆင်မဟုတ်လား ၊ ဘယ်သူ့ဆင် မို့လဲကွ ” တောဆင်မဟုတ်ပါဘူး ၊စော်ဘွားရဲ့စီးတော်ဆင်ပါ ခင်ဗျ ”
မင်းတို့စော်ဘွားနာမည်ကဘယ်သူလဲ ” စောခွန်ချို ” ဟေ့ငါ့နာမည်ကမိုးကုတ်မြမောင်စောခွန်ချိုကို ပြောလိုက် ၊ ငါကသူကိုယ်တိုင်ဝေါနဲ့လာခေါ်မှလိုက်မယ် ”ကျွန်တော်တို့ မြန်မာစကားတွင် `ဆင်သတ်အရပ်ဝေတယ်ဟုဆိုကြသည် ။သူတို့ကား ဆင်သတ်၍
ညီအစ်ကိုချင်း ကျီစယ်ကြခြင်း ဖြစ်သည် ။အကြောင်းမှာကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကိုမြမောင်နှင့်စောခွန်ချို သည် မအေညီအစ်မအရင်း ညီအစ်ကိုတစ်ဝမ်းကွဲ ဖြစ်သည် ။
စောခွန်ချိုကတကယ်ပဲကိုမြမောင်အားဝေါနှင့်လာကြိုရသည်တဲ့ ။” ဆရာ့သူငယ်ချင်းက အတော်ဆိုးတဲ့လူဗျာ ” ဟု စောခွန်ချိုကကျွန်တော့်ကိုပြောပါသည်။ဟုတ်ကဲ့ ။ကိုမြမောင်ကားတော်တော်ဆိုးတဲ့လူပါ ။ ဖဆပလအစိုးရလက်ထက်ကလည်းဝန်ကြီးတွေ
မာစီဒီးကား စီးရသည်၌ ဝန်ကြီး သခင်သာခင်သည်မိုးကုတ်သားဖြစ်၍ ထိုမာစီဒီးကားနှင့် မိုးကုတ်သို့ ရောက်သွားသည် ရှိသော် ယင်းအချိန်၌ ကိုမြမောင် ကားလည်း မာစီဒီး ဖြစ်နေသောကြောင့်” ဟာ သခင်သာခင်တောင် ဒီကားမျိုးစီးတယ်ဆိုရင် ငါမစီးတော့ဘူး
”ဟု ဆို၍ သူ့ကားသူ ချောက်ထဲ မောင်းချပစ်လိုက်သည် ဟူသတည်း ။ကဲ … မယုံလျှင် ပုံပြင်သာမှတ်ကြပေရော ။အမှန်တော့ကိုမြမောင်သည် တကယ်ပင် ရှိခဲ့ပါ၏ ။1968 ,ဇန္နဝါရီ 18 ရက် နေ့ကမှ အသက် ၄၁ နှစ်နှင့်
ဦးနှောက်အာရုံကြောပြတ်၍သေဆုံးသွားပါသည်။သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သည် ”ငွေကို လေလိုသုံးသူ ”ဟူသော ဝတ္ထုတို ရေးခဲ့ပါ၏။* ဝမ်းတွင်းပါ သူဋ္ဌေးစင်စစ် ကိုမြမောင်ကို ဝမ်းတွင်းပါသူဋ္ဌေးဟုခေါ်ရမည်ဖြစ်၏။သူ့မိဘများသည် မိုးကုတ်မြို့တွင်
ကံအကောင်းဆုံး ၊ ကျောက်အအောင်ဆုံး ဖြစ်၏။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးမဖြစ်မီကသူ့အဖေသည်ပြင်သစ် ပြည်ပဲရစ်မြို့တွင်ပတ္တမြားဆိုင်သွားဖွင့်ထား၍ မြန်မာပြည်မှ ကျောက်မျက်ရတနာများကိုကမ္ဘာ့ဈေးထိပ်တန်းမှ ရောင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။
ကိုမြမောင်သည် ပဲရစ်မြို့မှာသွားနေ၍ ပဲရစ်နှင့်လန်ဒန်ကိုအိမ်ဦးကြမ်းပြင်ကူးကာအမေရိကန် ၊ အင်္ဂလန် မီလျှံနာများ ကဲ့သို့သုံးဖြုန်းခဲ့ သူဖြစ်သည် ။
နောက် သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်၍ ပဲရစ်မှာ ပတ္တမြားဆိုင် မရှိတော့သော်လည်းကိုမြမောင်အဖို့ မြန်မာပြည်မှာသူ့တသက် ဘယ်လောက်သုံးသုံး၊ ဖြုန်းဖြုန်းမကုန်နှိုင်။သူ့မိခင်ကလည်း တစ်ဦးတည်းသောသားကြီးအား သုံးပါစေ၊ဖြုန်းပါစေ။ မသုံးမှာ၊မဖြုန်းမှာကိုသာ
ပူရသည်။ မြမောင် တစ်သောင်းဖြု န်းလျှင်၊တစ်သိန်းဝင်ငွေရသည်ဟုပြောစမှတ်ပြုသတဲ့။ကဲသည်လူမျိုး ကမ္ဘာတွင် မရှားပါလော ။* သို့သော် ငွေချမ်းသာရုံနှင့် ဘဝမှာ ပြည့်စုံပါသလော ? ? ? တနေ့သ၌ ကိုမြမောင်သည် အရက်အမူးလွန်၍ ကျွန်တော့အိမ်တွင်
လဲပြီး တရေးအနိုးမှာ ထပ်သောက်ရင်း ဘာတွေများ တွေးမိ၍ ဝမ်းနည်းလေသည် မသိ၊ မျက်ရည်တွေစို့လျှက် ကျွန်တော့အား ပြောဖူးပါသည်။”ကိုဆွေ ကျွန်တော့်မှာငွေတွေသိပ်ချမ်းသာတော့ သဘောရှိ သုံးဖြုန်းပြီး စိတ်ထင်သလိုနေရ၊ စားရတာ ပျော်တယ်၊
ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ကျေနပ်နေတယ်များထင်သလား။ မထင်နဲ့ ကိုဆွေ၊ ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ ခင်ဗျားဘဝလဲရရင်လဲလိုက်ချင်တယ်သိရဲ့လား ”ထန်းရည်မူး၍ ကျွဲခိုးပေါ်သည်။သူ့အသည်းနှလုံးထဲက ပြောသောစကား ဖြစ်သည်။
ယင်းကို ကျွန်တော် အလေးအနက် စဉ်းစားသည်။ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် လောကနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သည် ဆိုသောခေတ်၊ ငွေရှိ လိုတရသောခေတ်ကပင် သူနှင့်ကျွန်တော် ရင်းနှီးစွာ ပေါင်းသင်းခဲ့ပါသည် ။* ကိုမြမောင်သည် သူ၏ဇာတိ မိုးကုတ်မြို့နှင့် သူ့မိခင်နေသော
မန္တလေးမြို့မှာထက်…မြန်မာပြည်တွင် အကြီးဆုံး၊ သုံးလို့ဖြုန်းလို့ အကောင်းဆုံးသော ရန်ကုန်မြို့ကြီးမှာ အနေများပါသည်။ စထရင်းဟိုတယ်မှာလပေးနှင့်တည်းပါသည်။
ဟိုတယ်အောက်မှာသူ့ကားကြီးတစ်စီး ထားပါသည်။ သူလိုသမျှ ခိုင်းရန် လက်စွဲတော် တစ်ယောက်နှစ်ယောက်၊ လခပေး၍ ထားပါသည်။ နံနက်မိုးသောက်လျှင်သူတို့သည် သူ့ဆီသို့ ရောက်လာရသည်။ကိုမြမောင်သည်
နံက် ၈ နာရီလောက်မှာအိပ်ယာကထတတ်ပါသည်။ ဟိုတယ်ကပေးသောဘရိတ်ဖတ်စ်ခေါ် ကော်ဖီတစ်အိုး ၊ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်နှစ်ချပ်၊ဝက်မလွတ်ငှက်ပျောသီး ၂ လုံးကို စားလိုက စားပါသည်။
ရေချိုးအဝတ်လဲပါသည်။ရောက်လာမည့်မိတ်ဆွေများကိုမျှော်ပါသည် ။ဘာလုပ်ရအောင်နည်း။ ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုခုမှာနံက်စာ စားရအောင်ပါ ။ဟိုတယ်မှာစားတာ လူများပါမှ ဟင်းလျှာများများနှင့်စားလို့ မြိုင်သည် ၊မြိန်သည် မဟုတ်ပါလား ။
၁၁ နာရီလောက်ထိအောင် စောင့်သည်ရောက်သင့်သလောက် ရောက်မလာပါကဖုန်းရှိသောအိမ်ကို ဖုန်းဆက်၍ခေါ်သည်။ကားမရှိသော ဖုန်းမရှိသောသူကို သူ့လက်စွဲတော်နှင့်ကားလွှတ်၍ ခေါ်သည်။ အဲသူ့စိတ်ကြိုက်လူ ပြည့်စုံပါက သူကိုယ်တိုင်ကားမောင်း၍
ထွက်ခဲ့ပြီး ခုမနက်စာ ရွေးချယ်သော ဟိုတယ်သို့လာခဲ့ကြသည် ။ကိုမြမောင်၏ထမင်းစားပွဲတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသော ဝီစကီကို အရင်မှာသည်။ အစားကို ကိုယ်ကြိုက်ရာ မှာနှိုင်သည် ။ဤသို့ အသီးသီး မမှာလိုပါက ”ဟေ့ တို့ လူ ၆ ယောက်စာ ၊ ဟင်း ၁၀ မျိုး ”
စသည်ဖြင့် အော်ဒါ မှာသည် ။ ထမင်းတစ်နပ် ၅၀၀ နှင့် ၁၀၀၀ ကြားမှာ ရှိသည်။ (ထိုခေတ်ငွေတန်ဖိုး )ယင်းသို့ နံက်စာကို ၁၁ နာရီလောက်က စတင်သောက်ကြ ၊ စားကြပြီး နာရီပြန် ၁ ချက် လောက်မှာ ပြီးသည် ။ လူစုခွဲကြသည် ။
ကိုမြမောင်က လိုက်ပို့သင့်တဲ့လူ ပို့စေပြီး ”ကျွန်တော်တော့ ဟိုတယ်ပြန် မှိန်းဦးမယ်ဗျာ ” ဟု စထရင်းသို့ ပြန်၏။ သူ ယင်းသို့ မှိန်းပြီး နေ့လည် ၃ နာရီလောက် အိပ်ယာက ထ၏။ ရေချိုး၏။အဝတ်လဲ၏။ကဲ လူတစ်ယောက်(ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးထုံးစံ
)တစ်နေ့ထမင်းနှစ်ခါ စားရသည်မှာတစ်ခါကျန်သေး၏။ သူ့စားဖေါ်များကိုမျှော်ပြန် ၊ ခေါ်ပြန်၏။ ရောက်လာကြ၏။ ညနေ ၅ နာရီ ၊ ၆ နာရီ လောက်မှာ ကားနှင့်လျှောက်၍လေညင်းခံကြပြီးနာမည်ကြီးစားသောက်ဆိုင် တစ်ခုသို့ ရောက်ကြပြန်၏။
ကောင်းတာတွေသောက်ကြစားကြ ပြန်၏။ ည ၁၁ နာရီလောက် လူစုခွဲပြီး စထရင်းဟိုတယ်သို့ ကိုမြမောင် ပြန်အိပ်၏။နံက် ၈ နာရီလောက်အိပ်ယာကနိုးပြန်၏။ရေချိုးအဝတ်လဲပြန်၏။ မိတ်ဆွေတွေ ဆုံကြပြန်၏ ။ ဘဲအဲယားသို့မဟုတ် မာစီဒီးဘင့်ဇ်ကားကြီးနှင့်
စိတ်ကြိုက်ဟိုတယ်ရွေးပြီး သွားကြ ၊ သောက်ကြ ၊စားကြပြန်၏။ နာရီပြန် ၁ချက်လောက်လူစုခွဲကြပြန်၏။စထရင်းဟိုတယ်၌နေ့လယ် ၃ နာရီလောက် ကိုမြမောင် မှိန်းရာက ထပြန်၏။ရေမိုးချိုး၏။အဝတ်အစားလဲ၏။သောက်ဖေါ် စားဖေါ် မိတ်ဆွေတွေမျှော်
ပြန်ခေါ်ပြန်၏။ စုမိကြပြန်၏။ သွားပြီး သောက်ကြ၊စားကြပြန်၏။ သန်းခေါင်ကျော် ကိုမြမောင် ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ပြီး အိပ်ပြန်၏။ နောက်တစ်နေ့ တစ်မိုးသောက်ပြန်၏။ ကိုမြမောင်သည်သူ၏ နိစ္စဓူဝအတိုင်း တစ်နေ့တာ ပဋိစ္စသမုပ္ပာဒ်ကို လည်ရပြန်၏။အို ..
စာဖတ်သူ ၊ သင့်စိတ်ကူးဖြင့် သီတင်းတစ်ပတ်လောက် ၊သို့မဟုတ် ၁ လလောက်၊ သို့မဟုတ် သင့် စိတ်ကြိုက်သလောက် ကိုမြမောင် နေရာမှာ ဝင်ပြီး နေကြည့်စမ်းပါ။
ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ် ဘာရှိတော့ သနည်း ။( ၁ ) လောကကြီးတွင် ကောင်းကောင်းစား ၊ကောင်းကောင်းအိပ် ၊ကောင်းကောင်းနေရုံနှင့် မပြီးသေး တကား ။( ၂ ) သို့သော် ကျွန်တော်တို့သည် ကောင်းကောင်းစား ၊
ကောင်းကောင်းအိပ်၊ကောင်းကောင်းနေကြရန်ကြိုးစားနေကြရသည် မဟုတ်ပါလား ။ဤ အကြောင်း ၂ ရပ် ပေါင်းစပ်ပြီး စဉ်းစားလိုက်သောအခါ ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ် ပေါ်လာပေလိမ့်မည်။
စင်စစ် ဘဝကို လန်းဆန်းစိုပြေစေရန်၊ ဘဝကို မငြီးငွေ့ရန်မှာ အလုပ်လုပ်ရန်ပင် ဖြစ်ချေသည်။ကိုယ်လုပ်သောအလုပ်၌အောင်မြင်သည်လည်း ရှိမည် ၊ မအောင်မြင်သည်လည်း ရှိ၏။ကျေနပ်မှုလည်းရှိမည် ။ မကျေနပ်မှုလည်း ရှိမည်။ ဝမ်းသာမှုလည်း ရှိမည်၊
ဝမ်းနည်းမှုလည်း ရှိမည်။ ယင်းသည်ပင်ဘဝ၏အဓိပ္ပာယ်နှင့် အနှစ်သာရဖြစ်တော့သည် ။သို့သော် ကိုမြမောင်၌ မွေးကတည်းက အစစအရာရာ ပြည့်စုံနေသဖြင့် ဘာမျှလုပ်စရာမလို၊ဘာမျှကြိုးစားစရာ အကြောင်းမရှိ ။
သူသည် ဘဝ၏ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေသည်။ သူ့အခြေအနေက လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာကို လိုတရနေသည်။ ယင်းသည်ပင် ဘဝ၏မပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်ကို အလေးအနက် စဉ်းစားတတ်သူတို့ နားလည်ပေမည်။စင်စစ်ကား ဘဝဟူသည်မှာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး
၊တက်ကျ နိမ့်မြင့် မခြား၊ ဘယ်တော့မှပြည့်စုံသည် မရှိချေ။ယင်းမပြည့်စုံသည်ကို ပြည့်စုံလိမ့်နိုး ကြိုးစားနေရခြင်း သည်ပင် ဘဝမည်ပါ၏။ကိုမြမောင်၌ကား ယင်းသို့ ကြိုးစားစရာအကြောင်း မရှိလေ၍ ဘဝ၏ အလုပ်လက် မဲ့ဟု ကျွန်တော် ဆိုပါ၏။
The End Ko Yu Wai ( ဖတ်စေချင်၍တဆင့်ပြန်တင်ပေးခြင်းမျှသာ..)မူရင်းလင့် ဆရာသော်တာဆွေ ( သောင်းပြောင်းထွေလာ ၊ 1989 , June ) crea- H.M.Hမူရင်းပို့စ်တင်သူများနှင့် မူရင်းဓာတ်ပုံတင် သူကိုထင်လင်း ၊ ကိုထွန်းဦး တို့ကို Credit ပေးပါ၏
။ပုံပါစေတီနှစ်ဆူမှာ မိုးကုတ်မြို့ ချမ်းသာကြီးဘုရားတွင် ဦးမြမောင်မိသားစု လှူဒါန်းထားသော ရွှေစင်တစ်ပိသာ /ငွေစင်တစ်ပိသာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော ရွှေစေတီ /ငွေစေတီတို့၏ ပုံဖြစ်သည်။ ။